ဝါဝါဝင်းကုမ္ပဏီက သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် လယ်သမားတွေ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြနေစဉ်
အာဏာပိုင်တွေဖက်က ဖြေရှင်းမှုမလုပ်ပေးမခြင်း ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဆန္ဒပြလယ်သမားတစ်ဦးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"ညှိနှိုင်းလို့ အဆင်မပြေသေးတဲ့ လယ်တွေကို အဓမ္မခြံစည်းရိုးတွေခတ်နေတယ်၊ ခြံစည်ရိုးခတ်တာကို ရပ်ပေးရမယ်၊ စုံစမ်းစီစစ်ရေး စောင့်မယ်ဆိုရင်လည်း စုံစမ်းစီစစ်ရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို နှစ်ဖက်စလုံးနာခံမယ်။ စုံစမ်းစီစစ်ရေးမဆင်းခင်မှာ လယ်မြေတွေပေါ် အဓမ္မခြံခတ်တာ သဲဖုံးတာ အဆောက်အဦးဆောက်တာတွေ ဘက်ဟိုး တွေနဲ့လယ်မြေတွေပေါ်မှာ မြောင်းတွေကုတ်တာတွေကို လုံဝရပ်တန့်ပေးမယ်ဆိုရင် လမ်းလျှောက်တာကိုရပ်မယ်"
လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အနော်ရထာ စက်မှုဇုန်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ၁၉၉၈ ခုနစ်ကတည်းက လယ်ယာမြေ ဧက ၈ဝဝ ကို ဝါဝါဝင်းကုမ္ပဏီက သိမ်းယူထားတယ်လို့ သိရပြီး လယ်သမားတွေဟာ လယ်ယာမြေတွေမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် နိုဝင်ဘာလ (၁) နေ့ကစပြီး နေ့ရောညပါ ဝါဝါဝင်းကုမ္ပဏီရှေ့မှာ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာ ဒီကနေ့ဆိုရင် ၃ ပတ်ကျော်ရှိသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
These cronies haveavery good relationship with the Government,that is why,they can take,build,occupied what ever they want or they wished. So, can you tell may, Where and When will Burma,is on the way to Democracy. This is only fake,to show and toi cheat the World,now, The Generals and their cronies got back their Black Billion,Trillion money.They can go to All countries,they can transfer their Black money,which they had take from the country.